အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မွေးနေ့မှာကျွေးတဲ့ ကြာဇံချက်
Posted by တီချမ်း at 3:16 PM
Rita November 15, 2009 at 2:03 PM
sweetpeony November 15, 2009 at 8:05 PM
jr.lwinoo November 15, 2009 at 11:24 PM
mae November 15, 2009 at 11:32 PM
ချမ်းရေ.. happy birthday and many happy returns!!
နန်းညီ November 16, 2009 at 11:40 AM
ကြာဇံချက် မကြိုက်ဘူး တီ.. တခြားဟာကျွေးပါ
may November 16, 2009 at 3:59 PM
Wishing you all the best and always happy!
happy Birthday ... တီ။
reenoemann November 16, 2009 at 7:45 PM
PAUK November 17, 2009 at 7:19 AM
naychi November 18, 2009 at 12:38 PM
Facebook နေ့တိုင်းဝင်ပါတယ် notification လည်းမတွေ့လိုက်ဘူး
ခုမှပဲ wish လုပ်ရတာ့မယ်
HAPPY BIRTHDAY TTTTTTTTT!
moekhar November 18, 2009 at 9:43 PM
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ တီရေး))
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ ..း))
နောက်တော့ကျသွားတယ် .. ရုံးသစ်မှာ အပိုးကျိုးပြနေလို့ .. :D